Xasaasi Dhageyso: Soomaliland oo ku dhawaaqday Fal Dhibaato weyn ku keeni karta Shacabkeeda ka dib Markii ay sheegtay in…. – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Xasaasi Dhageyso: Soomaliland oo ku dhawaaqday Fal Dhibaato weyn ku keeni karta Shacabkeeda ka dib Markii ay sheegtay in….
by Tifaftiraha K24 4th August 2016 142
Maamulka Xukuumadda Somaliland ayaa shalay mamnuucay Baasaboorka Somalia ee sida qarsoodiga ah loogu samayn jiray Somaliland in aan Garoomada lagaga dhoofi Karin, isla markaana aan lagu soo gali Karin.
Taliyaha laanta socdaalka Somaliland, Jeneraal Maxamed Cismaan Caalin (Dayib), iyo Agaasimaha arrimaha gudaha Somaliland Cabdifataax Siciid Maxamed oo sida wada jir ah shirjaraa’id ugu qabtay magaaladda Hargeysa ayaa sheegay in gabi ahaanba aan Somalilnad lagu soo gali Karin, lagana bixi Karin Baasapoorka Soomaaliya ee lagu dhex sameeyo Somaliland, waxaanay sheegeen in qalabkii lagu samayn jirey in badan qabteen.
Agaasimuhu waxa uu intaas ku daray inay qabteen qalabkii lagu samayn jiray, isla markaana kuwo kalena ku daba jiraan soo qabashadoodda, .
Sidoo kale, waxaa isagana arrintan ka hadlay taliyaha laanta socdaalka Somaliland Sareeye Guuto Maxamed Cismaan Caalin (Dayib) waxaana uu sheegay in paasaboorka Soomaaliya ee ay mabnuuceen uu yahay ka foojariga ah ee lagu soo qoray waxaa laga bixiyey gobol ka mid ah Somaliland sida (Paasaboorkanwaxaa laga bixiyey Hargeysa , Burco, Borama Ama Laascanood ) oo kale .
Saxardiid ayaa uga digay muwaadiniinta Somaliland in ay Baasaboorka Soomaaliga u isticmaalaan sida baasaboorka Somaliland oo kale.
TOP NEWS: Ogow Qasaaraha ka dhashay Weerar lagu qaaday Guriga Taliyaha Howlgalinta NISA oo Muqdisho ku yaala..
War Cusub: Dhageyso Faroole” Saxaafadda ma Xishooneyso Been aan sal iyo Raad laheyn ayey iga qoren marka ay dhaheen Faroole ayaa dlabaday in….
Daawo Sawirrada: Duqeyn diyaaraddeed oo xalay lagu xasuuqay Dad shacab ah oo Beeraleey ah
DEG DEG: Ciidanka Amisom oo Muqdisho Fal Naxdin badan ka geystay